မြန်မာဘောလုံးအသင်းရဲ့ အနာဂတ် ရွှေရောင် မျိုးဆက်သစ်များ လာပြီလော? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာဘောလုံးအသင်းရဲ့ အနာဂတ် ရွှေရောင် မျိုးဆက်သစ်များ လာပြီလော?
မြန်မာဘောလုံးအသင်းရဲ့ အနာဂတ် ရွှေရောင် မျိုးဆက်သစ်များ လာပြီလော?
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း မြန်မာဘောလုံးဟာ နှစ်ပေါင်းအတော်အကြာ အောင်မြင်မှုမရတာ ကြာနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခုတလောလေးမှာ မွန်ဂိုလီးယားကို အနိုင်ရတာဟာ မြန်မာဘောလုံးအသင်းအတွက် ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ အတွေ့အကြုံတစ်လျှောက် ပထမအဦးဆုံး အောင်မြင်မှု ဖြစ်လာတာနဲ့ အတူ မြန်မာတွေရဲ့ ဇာတိမာန် ဟာလည်း ပြန်လည်တက်ကြွလို့ လာပါတယ်။
မကြာသေးခင်မှာပဲ လာအိုမှာ စတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ 2011 AFF U-16 လူငယ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မှာ မြန်မာဘောလုံးအသင်းကလည်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ U-16 အသင်းကို ဘရာဇီးလ်နည်းပြက အုပ်ချုပ်ပြီး လူငယ်အများစုကို ဘောလုံးအကယ်ဒမီက ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲမဝင်ခင်မှာ နည်းပြကတော့ မြန်မာတွေက ဘောလုံးအခြေခံရှိပြီး လေ့ကျင့်မှုသာ လိုတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီပွဲအတွက် Ready ဖြစ်နေပြီလို့လဲ ပြောပါသေးတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေက မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ သိပ်တော့ မယုံကြည်ရဲခဲ့ပါဘူး။
ခုချိန်မှာ မြန်မာအသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲကြီးအတွ့င် လာအိုရောက်နေပြီး အောင်မြင်မှုတွေရယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လေးပွဲကစားရမှာ3ပွဲ နိုင် ၁ ပွဲသရေနဲ့ 10 မှတ် ရရှိပြီး အုပ်စု B မှာ ပထမနေရာကရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် လက်ရွေးစင်အသင်းကြီး မရှုမလှရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဗီယက်နမ်ကိုတောင် 3-1 နဲ့တောင် အနိုင်ယူပြီး Semi Final ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတူ မြန်မာအသင်းဟာ Semifinal မှာ တော့ လာအိုအသင်းနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာဘောလုံးလူငယ်အသင်းဟာ Final တက်ဖို့ အတွက် အခွင့်အရေးတွေများနေပြီး လက်ရွေးစင် အသင်းကြီးအတွက်ပါ ရွှေရောင်အနာဂတ်တွေ တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာပရိတ်သတ်များမှာ ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသလဲဆိုရင် အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် AFF ရဲ့ Facebook Page မှာ ဝင်ရောက်အောင်ပွဲခံနေကြတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။
ကျွန်တော်အနေနဲ့ တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ မြန်မာအသင်းကို လာမဲ့ အိုမန်အသင်းနဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ကစားမယ်ဆိုလည်း အနီရောင်အကျီင်္တွေနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံတော်သီချင်းကို သံပြိုင်ဆိုကြကာ ၊ မြန်မာအသင်းကို လာရောက်အားပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
မြန်မာအသင်း ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ 1-1 ကမ္ဘောဒီးယား
မြန်မာ 2-1 ဖိလစ်ပိုင်
မြန်မာ 2-1 စကာင်္ပူ
မြန်မာ 3-1 ဗီယက်နမ်
မြန်မာအသင်းရဲ့ အုပ်စုအဆင့်ရပ်တည်မှုကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အောင်မြင်မှုနဲ့အတူ ဖလားယူပြီးပြန်လာနိုင်ပါစေ……
ကွင်းကြောင့် မိုးရွာလို့ ခရီးပမ်းလို့ လို့လို့စသဖြင့်ဆင်ခြေမြင်းခြေတွေ
အင်း…။ သိပ်တော့ မယုံရဲသေးဘူး..။ စိတ်ထဲကတော့ ဖြစ်ချင်တာတွေပေါ့..။ ဒါပေမဲ့ အဲဒိလိုပွဲတိုင်း မျှောင့်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ မဖြစ်ခဲ့တာတွေများနေပြီ..။
…မြန်မာဘောလုံးအသင်းရဲ့ အနာဂတ် ရွှေရောင် မျိုးဆက်သစ်များ လာပြီလော…
မလာနိုင်သေးပါ။ တပွဲထိုး လောက်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဝမ်းသာစရာကြီး .။ ဘောလုံးပွဲ ကို သိတ်မကြည့်တတ်ပေမဲ့ နိုင်တော့နိုင်စေချင်တာ ။ နိုင်ပါစေ ။
လောနိုင်ငံမှာ လော..လော..လော..လောနဲ့ လောဘတကြီး မလောမိဖို့လိုမယ်။ Lawကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီး လောပန်တွေက လောခိုင်းရင်လည်း မလောကြပါနဲ့…
♦ လက်ရှိ ယူ-၁၆ လက်ရွေးစင် အသင်းမှာ ဘောလုံး အကယ်ဒမီက ကစားသမား ၉၀% ပါဝင်နေ တာဖြစ်ပါတယ်။
အရက်ဖောဖောနေတဲ့ကောင်တွေ.. အသက်လိမ်တယ်လို့ပြောရလောက်တ​ဲ့ မျက်ခွက်မျိုးတွေမပါ ပါဘူး။
ကလေးတွေရုပ်ကလေးတွေက နုပါသေးတယ် Foreign Resident ရဲ့ . under 16 years ဖြစ်ဖို့များပါတယ် ။ မှတ်မိသလောက် အထက်တန်းကျောင်းလို ဖွင်းပေးတားတဲ့ကျောင်းရှိပါတယ် အားကစားနဲ့ စာနဲ့ တွဲ သင် တာပါ ။ သေသေချာချာ ရှင်းပြနိင်သောရွာသားများ ရှင်းပြပေးကြပါ ။
♦ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီ ဆရာလေးတွေက အသေအချာကို Skill ကျကျ လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ အနာဂတ်မှာ လင်းလက်လာမဲ့ လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် လက်အောက်က သက်တမ်းအလိုက် အသင်းတွေ အားလုံးထဲကမှ အသက် အမှန်ကန်ဆုံး အသင်း ဖြစ်ရုံသာမက သူတို့တတွေထက် အသက်ကြီးတဲ့ (သက်တမ်းမြင့်တဲ့) ပြိုင်ဘက် အသင်းတွေနဲ့ ခြေစမ်းပွဲတွေမှာ မာမာထန်ထန်နဲ့ အံတုရင်ဆိုင် ခဲ့ကြပါသေတယ်။
ထူးခြားရင် တင်ပေးပါအုံး .. အကိုရဲ့ အတွေးအထင်လေးတွေ ကြားတဲ့သတင်းလေးတွေပါ ထည့်ရေးပါနော်
ကိုယ့်နိုင်ငံအသင်းကိုတော့ အမြဲအားပေးဖြစ်ပါတယ်——နိုင်စေချင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် တကယ် အားကစားကို စိတ်ဝင်စားပြီး အရည်အချင်ရှိသူ ကို အသားအရောင် လူမျိ ုးခြားစိတ်မရှိဘဲ. ရွေးချယ်ဖို ့တိုက်တွန်း လိုပါတယ်။အဲလို မဟုတ်ဘဲ နဂိုတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ နားထား ကိုယ့်လူရေ လို ့ဘဲပြောရမှာပေါ့
သူတို့ကို ငွေကြေးနဲ့ကစားတာကိုမခံရအောင် ကျုပ်တို့ကာကွယ်ရမယ်
အထူးသဖြင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကျုပ်တို့ကို အထင်သေးတဲ့
တစ်နေ့ ခင်ဗျားတို့သိအောင် ကျမ်းစာတစ်စောင်ပြုစုတင်ပြပေးပါမယ်
ရွာမှာ ဘောလုံးကန်နေရင်း ဘောလုံးပေါက်သွားလို့
ဘောလုံးကို ပြန်ဖာဘို့ အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခါ
ကျွဲကော သီးကို ဘောလုံးလုပ်ပြီးကန်ခဲ့ရတာတွေ
အတွင်းခံဘောင်းဘီမရှိလို့ ပုဆိုးကို ခါးတောင်းကြိုက်
ပြီးရင် အပြင်က ဘောင်းဘီတိုထပ်ဝတ်ပြီး ကန်ခဲ့ရပုံတွေကို
ရတနာသိုက်တူးရင်း ငွေယားတွေ ကိုင်မိတဲ့လူနဲ့ကြုံလို့
ရှာဖွေ မှတ်သား လေ့လာကြလေလော့
ဒီသတင်းကြားရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေ။အဖျားမရှုးသွားပါစေနဲ့။
ကောင်းဗျာ ။ မြန်မာ့ အသံ က လွှင့်မယ် လို ့ထင်ပါတယ်နော် ။ အဲဒီကနေ အားပေးမယ်ဗျာ
Live Stream ပဲကြည့်လို့ရမယ်ခင်ဗျ…
အနိုင် အရှုံး က အဓိက မဟုတ် ယှဉ်ပြိုင် ခြင်း သည် အဓိက ………
ဒါပေမဲ့ ပြိုင်ပါတယ်ဆို မှ နိုင်တာဘဲလိုချင်တာပေါ့ ……… ရှုံးလာရင် လည်း ရှုံးတယ်လို့ဘဲ မှတ်လိုက်တော့ ……
သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါ …. ငယ်နိုင် ထိုင်းအသင်းကို နိုင်ရင် အရှေ့တောင် အာရှ မှာ ဗိုလ်ဖြစ်ပြီ ….
ပြီးရင် အာရှအဆင့် … နောက် ကမာ္ဘ အဆင့်ကို တက်လှမ်း နိုင်ပါစေ ……………….
ဘာပဲပြောပြော ရှုံးပွဲမရှိတာကိုက ပြည်သူတွေ အတွက် ဝမ်းသာစရာ… အားပေးပါတယ်ဗျာ… အမြဲတမ်း အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ပါစေ…
အောင်မြင်မှုတွေ ရယူပြီး ပြည်သူ. ကိုယ်စားပြု အသင်းဖြစ်ပါစေ…………..
♦ အသက်အရွယ်ရ ရော အတွေ့အကြုံအရပါ နုနယ်သဖြင့် စာအရေးအသားများမှာ မသေသပ်ဖြစ်နေပါသဖြင့် သည်းခံပေးကြပါ။
အားပေးနေပါတယ်.. ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း အမြဲအားပေးတာပေါ့.. ဒါပေမယ့် အခုလို အားရစရာ ရလဒ်တွေနဲ.ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့…
အခုဆို မြန်မာ ပွဲကြည့်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျ ရမဲ့ အချိန်တွေ ကုန်လွန်သွားပြီးနေမှာပါဗျာ….